Taliye ka tirsan Militeriga Maraykanka oo ka hadlay Ammaanka Somalia – idalenews.com
Maj. Mark J. Berman, oo ka tirsan Tababarayaasha Militeriga ee Hawlgalka Ciiddamadda Isku dhafka ee Geeska Africa (CJTF-H0A), ayaa sheegay in Xaaladda Ammaanka ee Somalia soo hagaageyso, in kastoo ay weli Kooxaha Argagixisada wadaan Falal ay ku carqaladeynayaan Ammaanka Somalia.
Taliyaha oo ka mid ah Khubaro oo Tababar siineysa 55-Sarkaal oo ka tirsan Ciiddamadda Uganda (UPDF), ayaa ku nuux-nuuxsaday inay Dowladiisu sii wadeyso Taageeradda dhinaca Tababarka iyo qalabeynta ee la siinayo Ciiddamadda UPDF ee ka qeybqaadanaya Hawlgalka Nabad ilaalinta Somalia, wuxuuna xusay in Ammaanka Somalia uu muhiim u yahay Ammaanka guud ee Caalamka.
Dhinaca kale, Taliyaha Kuliyadda Tababarka Ciiddamadda Uganda ee ku taalla Degmadda Jinja, Col. Godfrey Golooba, ayaa isagana sheegay in Saraakiisha Tababarka u socdo lagu wado in loo daadgureeyo Dalka Somalia si ay uga qeybgalaan Hawlgaladda Militeriga Rayidka (CMO).
‘’Somalia waxaa ku soo laabaneyso degnaanshaha, mana jiraan Colaado badan’’ ayuu yiri Taliyahaas oo intaa ku daray inay hanteen kalsoonida iyo quluubta Umadda Soomaaliyeed.
Madaxa isku xirka Ciiddamadda Maraykanka ee u Joogo Uganda Lt. Commander Anderson Perez, ayaa sheegay inay Ciiddamadda Maraykanka diyaar u yihiin sidii ay u dhisi lahaayeen Awooda Militeri ee Qaaradda Africa si ay u noqdaan kuwa xalin kara Mashaakilaadka ka jira Qaradda Africa.
Si kastaba ha ahaatee, Militeriga Maraykanka, ayaa waxay yihiin kuwo Tababar joogta ah siiyo Ciiddamadda UPDF-ka ee loo diro Hawlgalka Somalia.
Jan. Cali Gaab: “Baabuurkii saacad ka badan wadada yaala waa lala wareegayaa”